Koronto - Gpedia, Your Encyclopedia
Koronto (Af-Ingiriis: Electricity; Af-Carabi: كهرباء) waa awooda socodka elektaroono danabeysan. Sida caadiga ah korontadu waa ili-maqabatey, awood unugyo dabaysan oo socda kuwaasi oo qeyb ka ah awooda electromagnetismka. Jiritaanka korontada waxaa xidhiidh dhow la leh waxyaabo dhowr ah kuwaawi oo ka mid yihiin hilaaca, danabka, biriqda iyo noocyo kale.
Si kastaba ha ahaatee, korontadu waa halbowlaha dhamaan teknoolojiyada casriga ah ee maanta dunidu isticmaasho.
Qulqulka elektaronada dabaysan, kuwaasi oo iskugu jira positive iyo negative, ayaa waxay keenaan xidhmo koronto, taasi oo sameysa xidhmo magned. Sidoo kale, qulqulka elektaronada markuu taabto shay iska-caabin adag leh waxaa khasab noqota in elektaroono badan meeshaas isku soo gaadhaan taasi oo keenta in awoodii korontada loo badelo awood kuleyl taasi oo meesha ka soo saarta awood iftiin. Habkani waa sida laambadaha iyo laydhku ku shaqeeyo.
Biofuel power plant, United Kingdom
Coal-fired power plant, Taiwan
Concentrated photovoltaic power plant, Spain
Concentrated solar thermal power plant, United States
Flat panel photovoltaic power plant, India
Fuel oil power plant, Russia
Pumped-storage hydroelectric power plant, Japan
Run-of-the-river hydroelectric power plant, United States
Tidal power plant, France
Transmission line in Norway
Transmission line tower in Finland
↑ "electricity is at the heart of many modern technologies"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Koronto&oldid=171032"